EDM သွားတုုန်းက ဒီလုုိလူတွေ တွေ့ဖူးပါသလား??? In:Kawi Inspires, Videos
Celebrating Mothers’ Day In:Kawi Inspires, Videos
အမေများနေ့မှာ အမေ့ကို ဘာလက်ဆောင်တွေပေးမလဲ? In:Kawi Inspires
VSCO ကနေ ပုံလေးတွေကို ဘယ်လိုအသက်ဝင်အောင်လုပ်မလဲ??? In:Beauty Hacks, Kawi Inspires
အရေးကြုံတဲ့အခါ သင်ဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီကို အသက်ကယ်အကျႌအဖြစ် ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ??? In:Kawi Inspires, Life Hacks
လူတိုင်းအလွယ်တကူချက်လို့ရမယ့် မနက်စာကြက်ဥဟင်းလျာ (၃) မျိုး In:Kawi Eats, Videos
အမေနှင့် မီးဖိုချောင် In:Kawi Eats, Movies | Books | Apps
သင့်ကို မျက်ရည်ကျစေမယ့် ရုပ်ရှင်ကား (၁၀) ကား In:Kawi Inspires, Movies | Books | Apps
မိခင်နို့ရည်က ကလေးတစ်ယောက်အတွက် အစာအာဟာရဆိုတာထက်ပိုပါတယ် In:Kawi Eats
မိခင်နို့တိုက်ကျွေးတာနဲ့ နို့ဗူးတိုက်တာက ယနေ့ချိန်အထိ ငြင်းခုံနေကြဆဲဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုခေတ်ဆို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကြောင့် ဖခင်တွေသာ မကဘဲ မိခင်တွေပါ အလုပ်လုပ်လာရတာကြောင့် ကိုယ့်ရင်သွေးလေးတွေကို အချိန်မပေးနိုင်တော့ဘဲ နီးစပ်ရာလူတွေနဲ့ထားကြရတဲ့အခါ ကလေးခမျာ မိခင်နို့သောက်ရတဲ့အချိန်တွေနည်းပါးလာပါတော့တယ်။ သဘာဝတရားကလွန်စွာဆန်းကြယ်ပါတယ်။ ပြင်ပစားစရာတွေ ကလေးကိုကျွေးလို့ရပေမယ့် မိခင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကလာတဲ့ အာဟာရဓာတ်ကို ကလေးကိုတိုက်ကျွေးခိုင်းတာ အကြောင်းရှိနေလို့ပါ။ တစ်ခါတလေတော့လည်း သဘာဝတရားကြီးကို မျက်နှာမလွှဲသင့်ပါဘူး။ မိမိရင်သွေးကို မိမိကိုယ်တိုင် နို့ရည်တိုက်ကျွေးတာက ရင်သွေးလေးကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာစေနိုင်တဲ့အပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိခင်နဲ့ ကလေးကြားက ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေပေါ့။ ရင်သွေးလေးကို မိမိရဲ့လက်မှာ လုံခြုံစွာချီပွေ့ထားပြီး၊ မိမိ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကလာတဲ့ နို့ရည်ကိုတိုက်ကျွေးနေခြင်းကနေ ရရှိလာနိုင်တာက ကလေးငယ်တစ်ယောက်အတွက် အစာအာဟာရဆိုတာထက်ပိုပါတယ်။ ရင်သွေးလေးက မိခင်ရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်နေပြီး သူဟာ မိခင်ရဲ့အချစ်တွေနဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေကို ခံနေရပါလားဆိုတဲ့ လုံခြုံမှုခံစားချက်ကို သိနိုင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မိခင်နို့တိုက်ကျွေးတာဟာ မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲက မိခင်တစ်ယောက်အတွက် မိခင်စိတ်ဟော်မုန်းတွေကိုပါ ထုတ်လုပ်နိုင်စေပါတယ်။ ဒီလို ကလေးနဲ့ မိခင်ကြားက စိတ်ခံစားမှုအနှောင်အဖွဲ့လေးတွေက ကလေးတစ်ယောက် မိခင်ထံကအာဟာရဓာတ်လိုအပ်သလို လိုအပ်ပါတယ်။ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းက မိခင်နဲ့ ကလေးကြားမှာ ကြီးထွားလာမယ့်ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုကို အထောက်အကူပြုစေနိုင်ပြီးတော့၊ အဲဒီအရာက နောက်ပိုင်း ကလေးဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုမှာ အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါ၀င်လာမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် မိခင်နဲ့ကလေးကြားက လုပ်ယူစရာမလိုဘဲ သူ့အလိုလိုရရှိလာမယ့် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ယုံကြည်မှုတွေ၊ နားလည်မှုတွေ၊ လက်ခံနိုင်မှုတွေအတွက် ရှောင်ဖယ်မနေဘဲ တတ်နိုင်သမျှ အချိန်ပေးပြီး မိမိရဲ့ရင်သွေးလေးကို ကြင်နာစွာထွေးပိုက်ထားပြီး မိမိရဲ့နို့ရည်ချိုလေးတွေကို တိုက်ကျွေးကြည့်လိုက်ပါနော်!!! ...
အမေဆိုတာ တစ်သက်လုံး ကိုယ့်အတွက် မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ မညည်းမညူ ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးခဲ့သူပာ။ တစ်ရက်တလေတော့ မနက်စောစောလေးထ အမေ့ကိုဘေးမှာ အေးဆေးထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ ကိုယ်ကတစ်လည့် ပြန်ချက်ကျွေးကြည့်လိုက်နော်။ ဒါဆို အမေ့ရဲ့ အလှဆုံးအပြုံးကို တွေ့ရမှာပာ။ ကမ္ဘာမှာအလှဆုံးအပြုံးကို တွေ့ရဖို့ လူတိုင်း အလွယ်တကူချက်နိုင်မယ့် မနက်စာကြက်ဥဟင်းလျာ (၃) မျိုး ...
“မေမေရေ ဗိုက်ဆာပြီ။” ကလေးငယ် တစ်ယောက်ရဲ့ချစ်စဖွယ်အသံဖြစ်သော်လည်း လွန်စွာစူးစူးဝါးဝါးအော်သံကြောင့် အိ လန့်နိုးသွားလေသည်။ မနိုးတစ်ဝက် နိုးတစ်ဝက်နှင့်ရှိသော အိ ခန္ဓာကိုယ်လေးအပေါ် သေးငယ်သော လက်ကလေးများကျရောက်လာသည်။ “မေမေ မေမေ မေမေ” ဟင် မေမေဆိုပါလား။ ညဥ့်နက်မှအိပ်ထား၍ ဖွင့်မရသောမျက်လုံးကို အတင်းအားယူပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။ အိပ်မှုန်စုတ်ဖွားနှင့် ချစ်စဖွယ်ကလေးငယ်လေးသည် အိအနား။ “မေမေ မီးမီးဗိုက်ဆာတယ်။ ကြက်ဥကြော်စားချင်တယ်။” အိ ထိတ်လန့်သွားသည်။ မျက်လုံးများလည်း သူ့အလိုလိုအစွမ်းကုန်ပွင့်သွားသည်။ အလို မေမေလို့ခေါ်နေပါလား။ ဘယ်က ကလေးပါလိမ့်။ အမေ့လက်ချက်ပဲထင်သည်။ အမေက ကလေးချစ်တတ်တော့ ရပ်ကွက်ထဲက ကလေးများကို မုန့်ခေါ်ခေါ်ကျွေးတတ်သည်။ ပိတ်ရက်ဆို အိမ်၌ ကလေးများနှင့် အပြည့်။ သို့သော် ထိုကလေးမလေး၏ မျက်လုံးများ။ သူ့မျက်လုံးများမှာ ၀င်းလက်နေ၍ အိကို သူ့အမေဟု အတည်မှတ်နေဟန်။ “ဟင် နင်ဘယ်သူ့ကလေးလဲ။ မေမေရေ လာပါဦး။” အိ၏ အလိုမကျအော်လိုက်သံကြောင့် ထိုကလေးမလေး လန့်ဖျပ်သွားကာ အော်ငိုလေတော့သည်။ ပါးစပ်မှလည်း “ဖေဖေ” ဟု အသံသေးသေးလေးနှင့်။ ခြေသံပြင်းပြင်းကြောင့် တစ်အိမ်လုံးတုန်သွားကာ ခုတင်မှတစ်ဆင့် အိ၏ခန္ဓာကိုယ်လေးပါ တုန်သွားလေသည်။ အိ တစ်ခါမျှမမြင်ဖူးသော၊ ထွားထွားနှင့် ယောကျ်ားသားတစ်ယောက်သည် အခန်းထဲသို့ရဲတင်းစွာဝင်လာသည်။ အစကတော့ အိက ကြောင်နေ၍ အော်ရကောင်းမှန်းမသိ။ နောက်မှ သတိ၀င်ကာ အသံကုန်ဟစ်လေတော့သည်။ စောစောကတည်းက စည်းချက်ညီညီနှင့် အော်နေသောကလေးငယ်က အိ၏ အော်သံကြောင့်ပိုလန့်သွားကာ အသံပြိုင်၍ ထဟစ်သည်။ အထိတ်တလန့်နှင့်ဝင်လာသော အမျိုးသားလည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေပြီးတဲ့နောက် ကလေးမလေးကို ကောက်ချီကာ “သမီးလေး တိတ်တိတ်။ အင်း ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်။ မေမေကဆိုးတယ်။ ကလေးကို ငိုအောင်လုပ်တယ်နော်” လို့ ချော့မြူနေသည်။ အိ ဘက်ကိုလည်း လှည့်ကာ “မင်းကလည်း ကလေးကို အဲဒီလောက်တောင်အော်ရလား။ အမေမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲ။” ဟမ် အမေ။ လာပြန်ပြီ ဒီအမေ။ နုနုထွတ်ထွတ် အပျိုလေးအား အမေနှင့် သိပ်မှားချင်နေကြ။ “အိ ကသူ့အမေမှမဟုတ်တာ။ ဘာဖြစ်လို့ ခဏခဏ အမေလို့လာလာခေါ်နေကြတာလဲ” အိ ဘယ်လောက်တောင် အော်လိုက်သလဲမသိ။ သတိတောင်လစ်ချင်သလိုဖြစ်သွားသည်။ ဘာမှမမြင်ရတော့ဘဲ အမဲပြောင်ကြီးသာ အချိန်အတော်ကြာမြင်နေရသည်။ ထို့နောက် မြင်ကွင်းများ ပြန်ရှင်းသွားပြီး မီးဖိုချောင်တစ်ခုထဲရောက်နေသည်။ အကျီ င်္လက်ကို တံတောင်ဆစ်အထိ ခေါက်တင်ထားကာ၊ ထမီတိုတိုဝတ်ထားသော အမျိုးသမီးသည် တစ်စုံတစ်ရာကို အချိန်မမှီမှာစိုး၍ အလောသုံးဆယ် ချက်ပြုတ်နေသည်။ တစ်ဖက်မှလည်း ရေနွေးအိုးခလုတ်ကိုဖွင့်နေပြီး နောက်တစ်ဖက်မှ အိုးထဲကို ဆီသတ်နေသည်။ ရှုပ်ယှက်ခက်နေသော မီးဖိုချောင်လေးထဲကို အဖြူအစိမ်းကျောင်းဝတ်စုံလေးနှင့် ၅နှစ်အရွယ်လောက်ရှိလောက်မည့် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဝင်လာသည်။ လက်မှာလည်း ခေါင်းစည်းကြိုးရောင်စုံကို ကိုင်ထားလျက်။ ဆီထဲသို့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပစ်ထည့်လိုက်ပြီး ရှဲကနဲမြည်သွားသောအသံကြောင့် အနောက်ကို ရုတ်တရက်ဆုုတ်လိုက်သော အမျိုးသမီးငယ်နှင့် ခေါင်းစည်းကြိုးလေးများနှင့်ဆော့ကစားနေသော ကောင်မလေးနှင့် တိုက်မိလေတော့သည်။ အမျိုးသမီးလေးသည် ကလေးမလေးဘက်ချက်ချင်းလှည့်ကာ နှုတ်မှ “အို သမီးလေး။ ဗိုက်ဆာပြီလား။ စားတော့မလား။ ခဏလေးနော်။” ဟု မျက်နှာချိုချို အသံသာသာနှင့်ပြောနေသည်။ တဆက်တည်းမှာပင် ကလေးမလေး၏ လက်မှခေါင်းစည်းကြိုးများကိုယူကာ ဆံပင်လေးများကိုစုစည်း၍ ချည်နှောင်ပေးနေလေသည်။ ထိုအမျိုးသမီးလေးကတော့ တခြားသူမဟုတ် အိ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုအရာများကို အိကိုယ်တိုင် သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေခြင်းမဟုတ်။ တတိယလူနေရာက မြင်နေရခြင်းဖြစ်သည်။ မြင်ကွင်းများပြန်ဝါးသွားပြီး မည်းသွားလေသည်။ လျှော်ရမည့် အဝတ်တွေက များလှသည်။ အဖြူထည်နှင့် အရောင်စွန်းနိုင်သောအကျႌများကို ခွဲနေမိသည်။ ခွဲနေရင်း စိတ်ထဲမှာလည်း သမီးလေးကြိုက်တဲ့ ဘာဟင်းချက်ရင်ကောင်းမလဲတွေးနေသည်။ တွေးရင်းတွေးရင်း နောက်ဆုံးမှာ မိသားစုစုံစုံလင်လင် စားလို့မြိန်မယ့် ကြက်သားနှင့်အာလူးပဲချက်တော့မည်ဟု ရွေးချယ်လိုက်သည်။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ခဲထားသောကြက်သားကိုရေစိမ်ထားနေစဉ် အာလူးကိုအခွံခွာထားသည်။ ကြက်သားပျော့လောက်သောအခါတွင် အသားကိုနှပ်ရန် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ဘူးများကို စီထားလိုက်သည်။ ထို့နောက် ဦးနှောက်များရုတ်တရက် ရပ်သွားသလို၊ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ စဉ်းစားမရတော့။ ဘယ်အမွှေးအကြိုင်များကို အရင်ထည့်ရမည်နည်း။ အသားထဲစိမ့်ဝင်သွားအောင် ဘယ်လောက်ကြာကြာနှပ်ရမည်နည်း။ တစ်ခါမျှ မချက်ဖူးသော ကြက်သားအားလူးဟင်းက အိ သမီးလေးအကြိုက်တဲ့။ ထို့နောက် အိမ်မှ မီးဖိုချောင်ကနေ ရုတ်တရက် ဟင်းချက်ပြိုင်ပွဲထဲသို့ရောက်သွားသည်။ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိဖြစ်နေသော အိ အား ကြောက်စရာကောင်းသောမျက်လုံးများနှင့် စားဖိုမှုးဝတ်စုံဝတ်ထားသော ဒိုင်လူကြီးများက စိတ်ပျက်နေသောအကြည့်နှင့်ကြည့်နေသည်။ အချိန်ကလည်းစေ့တော့မည်။ ရေစိမ်ထားတဲ့ ကြက်သားလည်းမရှိတော့။ ဒိုင်လူကြီးတွေကလည်း အိ ကိုဝါးစားတော့မည်ဟန်။ အိ ငိုချင်လာသည်၊ စိတ်တွေလည်းရှုပ်လာသည်။ ဒုက္ခတွေ့မှ အမေ့ကို တ တတ်ကြသည့်လူတွေ၏ သဘာဝအတိုင်း အမေကိုသတိရလာသည်။ နောက်ဆုံး စိတ်မထိန်းနိုင်တော့သည့်အဆုံး “အမေရေ အိ ကိုကယ်ပါ” ဟု အော်ငိုလိုက်မိလေတော့သည်။ “သမီး သမီး အိ ဘာဖြစ်တာလဲ။ သမီးလေး ထ ထ” ချွေးတရွှဲရွှဲ၊ မျက်ရည်တစမ်းစမ်းနှင့် အိ နိုးလာသည်။ မျက်လုံးစအဖွင့်တွင် တွေ့ရသည်မှာ အမေ့၏ ထမီအနွမ်းလေး။ အော် အိ အိပ်မက်မက်နေသည်ပါလား။ ထို့နောက် အမေက အိ ၏ ချွေးစို့နေသောဆံနွယ်များကို သပ်ပေးနေသည်။ အမေလက်မှာတော့ ကြက်သွန်အနံ့ရသည်။ ခါတိုင်းဆို အမေ လက်လည်းသေချာမဆေးဘူး ဆိုကာ တွန်းထုတ်မိမည်ဖြစ်သည်။ အခုတော့ ထိတ်လန့်စရာကောင်းသော အိပ်မက်ကြောင့် အခုချိန်မှာ အိ အလိုအပ်ဆုံးက အမေဖြစ်နေသည်။ “အိ အိပ်မက်တွေမက်နေပြန်ပြီလား။ ထတော့လေ။ မနက်စာလာစား” အမေက ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် အိ အနားမှထသွားပြီး၊ မီးဖိုချောင်ဘက်သို့ ကွေ့သွားသည်။ ထို့နောက် နေ့စဉ်ကြားနေကျအတိုင်း အိုးခွက်ပန်းကန်အသံတွေ ဆက်ကြားရသည်။ အိသည် သူမ၏ အိပ်မက်အား သေချာပြန်စဉ်းစားနေမိသည်။ မီးဖိုချောင်ကစပြီး မီးဖိုချောင်မှာဆုံးသည်။ သမီးအတွက် ချက်ပြုတ်နေရသည့် မိခင်။ စဉ်းစားရင်း စဉ်းစားရင်း ငိုချင်လာသည်။ ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာလုံးကို သား၊သမီးတွေ စားဖို့၊ ၀တ်ဖို့ အိမ်မှာပဲနေကာ စီမံနေရသည့်မိခင်မျိုး အိ မဖြစ်ချင်။ သွက်လက်ထက်မြက်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဦးဆောင်နေရသည့် မိခင်မျိုးပဲ အိ စိတ်ကူးသည်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်မိန်းကလေးတိုင်းက ငါတော့ ကြီးလာရင် မီးဖိုချောင်မှာပဲ ဟင်းချက်မယ်လို့စိတ်ကူးမှာလဲ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲပြန်မဝင်နိုင်တဲ့ မိခင်တွေ၊ သား၊သမီးတွေအတွက်ပဲ တစ်သက်လုံးအချိန်ပေးလိုက်ရသည့်မိခင်တွေများပါဘိ။ ထိုမိခင်များတွင် အိ အမေလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ချူချာလှသည့် အိ အား ငယ်ငယ်ကတည်းက ခဏခဏ အလုပ်ဖျက်၍ စောင့်ရှောက်ပေးရင်း သမီးစိတ်ကြောင့် အလုပ်ဖြောင့်ဖြောင့်မလုပ်နိုင်တော့ဘဲ အလုပ်ကပါ ထွက်လိုက်တော့သည်။ အိ ၀ါသနာပါသည့် ပန်းချီရေးတာကို တစ်စုံတစ်ယောက်က မျက်နှာရှုံရင် နည်းနည်းလေးမှ မကြိုက်ချင်။ အမေမှာတော့ သူ့ဝါသနာ၊ သူ့အလုပ်အား သမီးကြောင့် စွန့်လွှတ်လိုက်ရသည်။ အိ မျက်ရည်ဝဲမိသည်။ အမေ့အပေါ် ယခင်ကထက် ပိုပြီး ကောင်းကောင်း ဆက်ဆံတော့မည်ဟုတွေးကာ အိပ်ရာမှထပြီး အမေရှိရာ မီးဖိုချောင်ဆီသို့သွားသည်။ မွှေးကြိုင်လာသည့် ရနံ့နှင့်အတူ စားပွဲပေါ်တွင် ကြက်ဥကြော်နှင့် ပေါင်မုန့်ကိုပါ တပါတည်းတွေ့ရသည်။ အမေ က အိ ကိုမကြည့်အား။ ဟင်းအိုးမွှေရင်း အလုပ်ရှုပ်နေသည်။ အိ က အမေ့ကိုကြည့်ရင်း စားမဝင်ဖြစ်နေသည်။ အမေ့ဆီကို လျှောက်သွားရင်း အမေ့ခါးကို ဖက်ကာ၊ ပါးကို နမ်းလိုက်မိသည်။ အမေနည်းနည်းတောင် အိုသွားသလိုပဲ။ အိ မျက်ရည်စို့မိပြန်သည်။ အမေကတော့ အချိုသာဆုံးအပြုံးလေးနှင့် ပြုံးပြသည်။ အမေ ချက်နေသောဟင်းကို ငုံကြည့်မိလိုက်သောအခါ တွေ့လိုက်ရသည်မှာ “ကြက်သားအာလူးဟင်း”။ (ခေတ်ခေတ်) ...
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမေများနေ့ဆိုတဲ့ နေ့လေးကို မေ့နေလေ့ရှိကြပါတယ်။ အမေများနေ့မှာ အမေ့ကို ကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ လက်ဆောင်လေးတစ်ခုတောင် မပေးဖြစ်ကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကသာ အမေဆီက မုန့်ဖိုးတွေတောင်း လိုချင်တာတွေဝယ်ခိုင်းတတ်ကြတာပါ။ အမေက စျေးကြီးတဲ့လက်ဆောင်ကိုမှ လိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ သတိတရနဲ့ လက်ဆောင်လေးတစ်ခုခုနဲ့ ဝယ်ပေးတယ်ဆိုရင်ပဲ ကျေနပ်နေကြမှာပါ။ အမေများနေ့မှာ စျေးကြီးတဲ့ လက်ဆောင်တွေမှမဟုတ်ဘဲ အကောင်းဆုံးပေးလို့ရမယ့် လက်ဆောင်တွေကတော့… ၁. ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးမှာ လိုက်ကျွေးပါ တစ်နေ့တစ်နေ့ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ တစ်မိသားစုလုံးအတွက် ချက်ပြုတ်ကျွေးနေတဲ့အမေ့ကို ဒီတစ်နေ့တော့ ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးမှာ အမေကြိုက်တတ်တာလေးကို လိုက်ကျွေးလိုက်ပါ။ ……………………………………………………………….………………………….. ၂. ကိုယ်တိုင်ချက်ကျွေးပါ ကိုယ့်မှာအချိန်ရှိတယ်ဆိုရင် “ဒီနေ့တော့အမေရေ အိမ်မှာနားနေ သား၊ သမီး ချက်ကျွေးမယ်ဆိုပြီး ပြောလိုက်ပါ” တအံ့တသြနဲ့ ပြုံးနေတဲ့အမေ့ကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အမေတို့ နေ့တိုင်းလုပ်နေကျအလုပ်ကို တစ်ရက်တာဝင်လုပ်ကြည့်ပေးပါ။ ကိုယ်တိုင်စျေးသွား၊ အမေကြိုက်တတ်တာလေးတွေဝယ်ပြီး ချက်ကျွေးကြည့်ပါ။ ……………………………………………………………………………………..……. ၃. အမေကြိုက်တတ်တဲ့ ပစ္စည်း အမေဆိုတာလည်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။ ကိုယ်က သမီးတစ်ယောက်ဆိုရင် ကိုယ့်လိုပဲ အမေလည်းလှချင်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လှဖို့ထက် ကိုယ့်သားသမီးလှဖို့ ပိုပြီးဦးစားခဲ့တာ အမေပါ။ အမေ့မှာလည်း မပြောဖြစ်ပေမယ့် အရမ်းလိုချင်နေတဲ့ အိတ်လေး ဒါမှမဟုတ် အလှပြင်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုခုရှိနေမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒါကိုမသိသိအောင်လုပ်ပြီး ဝယ်ပေးလိုက်ပါနော်။ ………………………………………………………………..………………………… ၄. ဓာတ်ပုံ album အမေတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝမှာ ဘာအရေးအကြီးဆုံးလဲလို့မေးရင် မိသားစုလို့ ဖြေကြပါလိမ့်မယ်။ အမေချစ်တဲ့ မိသားစုရဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ အတူဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ အမှတ်တရလေးတွေပါဝင်တဲ့ ဓာတ်ပုံ album လေးက အမေ့အတွက် စိတ်ကြည်နူးစေမယ့် လက်ဆောင်လေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ……………………………………………………………………………………………. ၅. အမေလိုအပ်တဲ့အရာ သာယာပြီး ပျော်ရွှင်စရာအိမ်လေးဖြစ်အောင် အမြဲကြိုးစားနေတတ်တဲ့ အမေတွေမှာ အိမ်အတွက်လိုချင်နေတာလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကျန်တဲ့အိမ်ကိစ္စတွေအတွက် ပိုအချိန်ပေးနိုင်အောင် အဝတ်တွေအတွက်အချိန်မကုန်စေဖို့ အဝတ်လျှော်စက် ဒါမှမဟုတ် ဟင်းကောင်းကောင်းတွေချက်နိုင်ဖို့ စားစရာတွေထည့်သိမ်းလို့ရမယ့် ရေခဲသေတ္တာကောင်းကောင်းလေး တို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီထဲကတစ်ခုခုကို ဝယ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အမေ့ကို ဝမ်းသာသွားစေမှာပါ။ …………………………………………………………………………………………… ၆. အမေ့အတွက်ပန်းစည်း အမေဆိုတာလည်း မိန်းမသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် မိန်းကလေးတွေရဲ့ သဘာဝအတိုင်း ပန်းတွေကိုချစ်မြတ်နိုးလေ့ရှိပါတယ်။ ပန်းစည်းဆိုတာက တန်ဖိုးသိပ်မရှိပေမယ့် အချိန်အကြာကြီးတာရှည်မခံပေမယ့် အမေများနေ့မှာ သူ့အတွက် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ပန်းစည်းလေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် မထင်မှတ်ပဲရခဲ့တဲ့လက်ဆောင်အတွက် သူပျော်နေမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………… ၇. အမေ့ကိုပေးချင်တဲ့ကတိ တကယ်လို့ အမေများနေ့မှာ ပစ္စည်းတွေမဝယ်ပေးချင်ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် ဝယ်ဖို့လည်းမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ကတိလေးတစ်ခုသာပေးလိုက်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် အမေမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်တော့တာမျိုး၊ အမေဖြစ်ချင်တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့လူတစ်ယောက် အရည်အချင်းပြည့်တဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဒီလိုကတိတွေပေးပြီး တည်အောင်ကြိုးစားခြင်းကလည်း အမေ့ကိုစိတ်ချမ်းသာစေတဲ့ လက်ဆောင်တစ်မျိုးပါပဲ။ ကဲ… အားလုံးပဲ မေလ ၁၂ ရက်နေ့(တနင်္ဂနွေနေ့)မှာ ကျရောက်မယ့် အမေများနေ့မှာ အမေ့ကို လက်ဆောင်လေးတွေပေးရင်းနဲ့ ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း ဘယ်လောက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပြလိုက်ရအောင်… ...
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ကဝိရဲ့ချစ်သူလေးတွေ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ရုပ်ရှင်ကား (၁၀)ကားကို ပြောပြပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁) The Theory of Everything သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး စတီဗင်ဟော့ကင်းကို အားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒီဘက်ခေတ်ရဲ့ ဒုတိယ အိုင်းစတိုင်းလို့တောင် တင်စားကြပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးက စတီဗင်နဲ့ သူ့ဇနီးတို့ရဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။ သူက သာမန်လူကောင်းတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် သူရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကတော့ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ အာကာသနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ သီအိုရီတွေလည်း အများကြီးထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူရဲ့အချစ်သီအိုရီကရော ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ဒါ့အပြင် ရုပ်တူတဲ့ မင်းသားကြီး Eddie Redmayne ရဲ့ ပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ဇာတ်လမ်းလေးက ပိုပြီးအသက်ဝင်သွားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပဲ မင်းသားကြီး Eddie Redmayne ကအကောင်းဆုံး အမျိုးသား အော်စကာဆုကို ရယူနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ………………………………………………………………………………………. ၂) One Day ဒီကားလေးကတော့ ထိုင်းကားလေးပါ။ ဒီကားလေးကြည့်ပြီးရင် ငိုရရုံတင်မဟုတ်ပါဘူး မချိတင်ကဲတွေ ဖြစ်၊ အသည်းတွေယားပြီး ကျန်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ရုပ်မချောတဲ့ သာမန်ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့အချစ်ကို တင်ဆက်ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဆုတောင်းလေးတစ်ခုု တကယ်ပြည့်သွားတဲ့အခါ မထင်မှတ်ထားတာတွေဖြစ်လာခဲ့ပေမယ့် ဇာတ်လမ်းရဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့…………….. မပြောပြတော့ဘူးနော်။ ဇာတ်ကားလေးကို ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ပါလို့….. (ပြီးတော့မှ မချိတင်ကဲတွေဖြစ်ပြီး ကဝိကို လာမပြောကြနဲ့နော် 😛 ) ………………………………………………………………………………………. ၃) Up “ငယ်ကချစ် အနှစ်တစ်ရာ” ဆိုတဲ့အတိုင်း ငယ်စဉ်တည်းက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အရမ်းချစ်ကြတဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲရဲ့ အိမ်မက်တွေက ကြီးမားခဲ့ပါတယ် (ခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ အိမ်မက်တွေ စျေးကြီးတယ်ပေါ့)။ အသက်တွေကြီးလာလို့ ကောင်မလေးက အဖွားကြီးဖြစ်ပြီး ဆုံးပါးသွားတဲ့အခါမှာ အဖိုးက သူတို့မက်ခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်လေးကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။ အိမ်မက်တွေက စျေးကြီးပေမယ့် မရရအောင် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တဲ့ ကာတွန်းကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်တော့ဆန်ပေမယ့် ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်။ ………………………………………………………………………………………. ၄) The Help ဒီကားလေးက ၁၉ ရာစုနှစ် လူဖြူ၊ လူမည်းခွဲခြားတဲ့ခေတ်ကို နောက်ခံထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေး တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီခေတ်က အနှိမ့်ချခံရ၊ ခွဲခြားခံရတဲ့ လူမည်းအမျိုးသမီးအိမ်ဖော်တွေရဲ့ ဘဝကိုထင်ဟပ်ပြသထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။ သူတို့ရဲ့ နှိမ့်ချခံရပုံ၊ ခွဲခြားခံရပုံကို လူဖြူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ကမ္ဘာကိုချပြဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရလဲ? ကမ္ဘာကိုရော ချပြနိုင်သွားမှာလားဆိုတာ ဇာတ်ကားလေးကို ကြည့်လိုက်ပါ။ သူတို့ရဲ့ ဘဝကို စာနာနားလည်သွားလောက်အောင် ကောင်းတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ………………………………………………………………………………………. ၅) Me Before You တစ်ချိန်က အရမ်းချမ်းသာတဲ့အပြင် အရာရာမှာထူးချွန်ပြီး ဘဝဆိုတာပျော်စရာတွေနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ဟက ခေါင်းကလွဲပြီး တစ်ကိုယ်လုံးမလှုပ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာ လောကကြီးကို အရှုံးပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် မထင်မှတ်ပဲ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ချစ်စရာကောင်မလေးတစ်ယောက် သူ့ကိုပြုစုပေးဖို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မယ်ထင်လဲ? သူလောကကြီးကို ဆက်အရှုံးပေးလိုက်မှာလား သူ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြန်ပြင်မှာလား? ………………………………………………………………………………………. ၆) The Note Book ချမ်းသာတဲ့ မိသားစုကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို သာမန် လက်လုပ်လက်စားကောင်လေးတစ်ယောက်က မြင်မြင်ချင်းမှာပဲ ချစ်သွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့အချစ်တွေက သာမန်မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ သူတို့ဝေးသွားပြီး နှစ်တွေကြာသွားခဲ့တာတောင် ကောင်လေးရဲ့အချစ်တွေက ပြောင်းလဲမသွားခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးကတော့ အချစ်သစ်ကို တွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက် ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ ဇာတ်လမ်းတွေတစ်မျိုးတစ်ဖုံပြောင်းသွားပြန်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်ကားလေးကိုပဲ ကြည့်လိုက်တော့နော်။ တကယ်ကို ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်။ ………………………………………………………………………………………. ၇) Titanic ဒီကားလေးက ဘာမှတောင်ပြောနေစရာမလိုတဲ့ တော်တော်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ကားလေးပါ။ လူတိုင်းလည်း သိကြမှာပါ။ ဒီကားလေးကို ရွေးချယ်ထားရတဲ့အကြောင်းအရင်းလေးက သင် ဒီကားလေးပြန်မကြည့်ဖြစ်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ? အရမ်းကောင်းတဲ့ကားလေးကို နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်ဖို့ သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပါ။ ဒီကားလေးကြည့်ပြီး ဘယ်လောက်ခံစားရတယ်ဆိုတာတော့ ပြောမနေတော့ပါဘူးနော်။ ………………………………………………………………………………………. ၈) Boy in the Striped Pyjamas ဒီကားလေးကတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အချိန်ကာလကို နောက်ခံထားပြီး ရိုက်ကူးထားတာပါ။ လုံးဝ ရန်သူမျိုးနွယ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂျူးအကျဉ်းထောင်ရဲ့ ဂျာမနီတပ်ချုပ်ကြီးရဲ့ သားလေးနဲ့ ဂျူးအကျဉ်းသားတစ်ဦးရဲ့ ရွယ်တူသားလေးတို့ရဲ့ ဖြူစင်တဲ့သံယောဇဉ်ကို တွေ့ရမှာပါ။ ရန်သူမျိုးနွယ်စု နှစ်ခုကြားမှာ လူလူချင်းကိုယ်ချင်းစာနာမှုနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ဖြူစင်တဲ့သံယောဇဉ်တို့ကို ပုံဖော်ထားတာပါ။ တမှုထူးခြားတဲ့ Drama ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ………………………………………………………………………………………. ၉) Five Feet Apart နာတာရှည်ရောဂါခံစားနေရတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်။ ကိုယ်တိုင် အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ ရုန်းကန်ရင်း သာမန်လူတစ်ယောက်လို နေထိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတုန်း သူမလိုပဲရောဂါခံစားနေရတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်စီအခက်အခဲတွေကို ရုန်းကန်နေရတဲ့ကြားက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်မိသွားတဲ့အခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲ? ဘယ်လိုတွေ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလည်း ဇာတ်ကားလေးကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်သာ ခံစားလိုက်တော့နော်! ………………………………………………………………………………………. ၁၀) Dumbo Dumbo ကာတွန်းကားလေးကို အားလုံးကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ အခုက ဒီကာတွန်းလေးကို တကယ့်အပြင်ကပုံစံ ပြန်ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အမေနဲ့ကွဲသွားတဲ့ ဆင်လေးက ဆပ်ကပ်ထဲမှာ အခက်အခဲတွေနဲ့ ပြဿနာတွေကို ကြုံတွေ့နေခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ အစွမ်းတွေကို သိရှိသွားတဲ့အခါမှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲဆိုတာကတော့……………. ဇာတ်ကားလေးကိုပဲ ကြည့်လိုက်တော့နော်! အားလုံးပဲ အားလပ်ချိန်လေးတွေမှာ ဒီဇာတ်ကားလေးတွေကိုကြည့်ပြီး အပြည့်အဝအနားယူနိုင်ကြပါစေ။ ...
VSCO ဆိုတာက သင့်ရဲ့ပုံလေးတွေမှာ Filter လေးတွေတပ်ပြီး ဓာတ်ပုံလေးတွေပြင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကို အဆွေးဆိုရင်လည်း အဆွေးဓာတ်လေး၊ အလွမ်းဆိုလည်း အလွမ်းဓာတ်လေး၊ ခေတ်ဟောင်း စတိုင်ဆိုလည်း ခေတ်ဟောင်းဓာတ်လေးနဲ့ အရောင် Filter လေးတွေ တပ်လိုက်တာပါ။ ဒါက သင့်ရဲ့ ရိုးရိုးဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကို အသက်ဝင်သွားစေပါလိမ့်မယ်။ Social Media ပေါ်မှာ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေနဲ့ ဂေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက သင့်အတွက်ဖြစ်မှာပါ။ Free Filter လေးတွေကနည်းနည်းပဲပါတယ်ဆိုပေမယ့် နောက်ထပ် FIilter တွေအများကြီး ထပ်ဝယ်လို့ရပါတယ်။ အရမ်းလည်း စျေးမကြီးပါဘူး။ သုံးဖူးတဲ့လူတွေတော့ သိကြမှာပါ။ Processed with VSCO with g3 preset Processed with VSCO with g3 preset Processed with VSCO with g3 preset Processed with VSCO with g3 preset Processed with VSCO with g3 preset ဒီပုံလေးတွေကတော့ ဘယ် Filter လေးတွေကိုတပ်ပြီး ပြင်လိုက်ရင် ဘယ်လိုအရောင်လေးတွေနဲ့ ဘယ်လို vibe လေးတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးထားတာပါ။ အားလုံးပဲ Social Media မှာ ပုံလှလှလေးတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေနော်။ ...
ဒီနည်းလေးဟာ ရေမကူးတတ်တဲ့သူတွေထက်စာရင် ကိုယ်သေချာမဖော့တတ်တဲ့သူတွေအတွက် ပိုအဆင်ပြေမှာပါ။ ၁) သင်္ဘောနစ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မတော်တဆ ရေနစ်သွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ သင့်ရဲ့ဘောင်းဘီကို အလျင်မြန်ဆုံးချွတ်ရပါမယ်။ ၂) ပြီးရင် ဘောင်းဘီရဲ့ခြေထောက်အစွန်းနှစ်ဖက်ကို အထုံးလေးဖြစ်သွားအောင်ချည်လိုက်ပါ။ အသေအချာခိုင်နေအောင် နှစ်ခါလောက်ထုံးပါ။ ၃) ပြီးရင်တော့ ထုံးထားတဲ့ ဘောင်းဘီကွင်းကို လည်ပင်းမှာလျှိုလိုက်ပါ။ ၄) နောက်ပြီး ဘောင်းဘီရဲ့ခါးအနားကို ရေထဲမှာ ဆွဲဟလိုက်ပါ။ လက်ဖဝါးကိုခုံးခုံးလေးလုပ်ပြီး ဘောင်းဘီခါးအနားစမှာရှိတဲ့ ရေတွေကို ဘောင်းဘီထဲဝင်လာအောင် အတွင်းဘက်ကိုရိုက်ချပါ။ ၅) ဘောင်းဘီက လေတွေဝင်လာပြီး ဖောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ လုံလောက်တဲ့ အနေအထားထိဖောင်းလာပြီးရင်တော့ အနားအစွန်းကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ စုကိုင်ထားပါ။ ၆) အဲဒီလို စုကိုင်ထားနေတုန်းမှာ ကျန်ရှိနေတဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ အန္တရာယ်ကင်းမယ့်နေရာကို အမြန်ဆုံးကူးခတ်ပါ။ အဲဒီနည်းအပြင် နောက်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းတစ်မျိုးက ထုံးထားတဲ့ ဘောင်းဘီအစ ကို လည်ပင်းစွတ်ရမယ့်ဘက်က တစ်ဖက်စီကိုင်ပြီး လေပေါ်မှာ တစ်ချက်ဝှေ့လိုက်ပြီး ရေထဲကိုရိုက်ချလိုက်ပါ။ ထိုနည်းဖြင့်လည်း ဘောင်းဘီစက လေဝင်ပြီးဖောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေဟာ ရေတပ်စစ်သားတွေ အသုံးပြုတဲ့နည်းပါ။ ဒီအသက်ကယ်အကျႌဟာ သင့်ကို ရေအပေါ်မှာအကြာကြီးမထိန်းထားနိုင်ရင်တောင် နာရီပိုင်းအနည်းငယ်လောက်တော့ သင့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာက အားအင်တွေကိုသက်သာစေမှာပါ။ စိတ်မကောင်းစရာကတော့ ဘောင်းဘီအတိုကိုတော့ ဒီနည်းတွေနဲ့ သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘောင်းဘီအရှည် ဒါမှမဟုတ် ဒူးလောက်ရှည်တဲ့ဘောင်းဘီတွေမှသာ အသုံးပြုဖို့ အဆင်ပြေမှာပါ။ ...
EDM သွားတုုန်းက ဒီလုုိလူတွေ တွေ့ဖူးပါသလား??? ...